Google က Duo ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် | အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုကို Android App ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » tutorials » Google က Duo ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် | အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုကို Android App ကို
Google က Duo ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်
ရယူခြင်းကောင်းတစ်ဦးအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုဗီဒီယို app ကိုလွယ်ကူသည်မဟုတ်, အဲဒီမှာတူညီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်ထိုအရပ်၌များစွာသော apps များထဲကအချို့အခမဲ့ဖြစ်ကြပြီးအချို့ဘို့သင့်ကိုပိုက်ဆံပေးချေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သို့သော် Duo အခမဲ့နှစ်ဦးစလုံးသောအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတောင်းဆို app ကိုတစျဦးဖွစျသညျ google သငျတို့သတောင်မှဗီဒီယိုရလဒ်လျောက်ပတ်ပါလိမ့်မည်သေးငယ်တဲ့ bandwidth ကိုအတူဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုရန်နိုင်အောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
အပိုဆောင်းအင်ဖိုအတွက်သင့်အကြောင်းအဆင်သင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝစကေးပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပေမည် Google က Duo အဆိုပါ AppsApk အရာရှိတဦးကပြန်လည်သုံးသပ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ။
Google က Duo ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် -Simple interface ကို
တစ်ဦးကိုခစျြတစျခု Pick နှင့်ဗီဒီယိုတစျဦးကိုထိပုတ်ပါသကဲ့သို့လွယ်ကူသောတောင်းဆိုစေသည်ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုအတူ၌တရားခုန်။
* app ကိုခေါ်ဆိုခြင်းအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသောဗီဒီယို
အတှေ့အကွုံကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဗွီဒီယိုကိုသငျသညျကို Wi-Fi ကိုပေါ်တွင်သို့မဟုတ် On-The-သွားလာရင်းင်ရှိမရှိအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်အတူတောင်းဆိုထားသည်။
Android နှင့် iOS device များအတွက်
Duo Android နှင့် iOS စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်ရုံတစျခု app ကို အသုံးပြု. အားလုံးသင့်ရဲ့အနီးကပ်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုမခေါ်နိုင်ပါ။
သငျသညျတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကို preview ကိုအတူတက်ကောက်မတိုင်မီတောင်းဆိုမယ့်သူကိုကြည့်ရှုပါ။
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းသင့်ခေါ်ဆိုမှုမဖြေနိုင်သလဲ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သူတို့ကိုလက်ျာဘက်ပြန်သငျသညျကိုပဌနာရန်အဘို့အဗီဒီယိုတစ်ကားကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုချန်ထားပါ။ ဗီဒီယိုတစ်ကားစာနှင့်အတူ, သင်ဆဲသင်မျှဝေစေချင်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်အကြောင်းကိုအရာရာဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကိုဗီဒီယိုကျော် chat နိုငျသောအခါအသံသာ Make သင်၏မိတ်ဆွေများမှတောင်းဆိုထားသည်။
ဒါဟာ FaceTime သကဲ့သို့စင်ကြယ်၏ပေါင်းကအန်းဒရွိုက်အဖြစ်ကို iOS ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်
စမတ်ဖုန်း skype တွင်ရုံကိုလည်းကောင်းစွာချိတ်ဆက်နှင့်ကိစ္စများတွင်အတော်လေးနှေးကွေးရပါဘူး။
Google က Duo ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် Pros
စင်ကြယ်ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်း UI ကိုအကောင်းဆုံးဗွီဒီယိုအရည်အသွေးသည်အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
Google က Duo ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ် - Cons
မဆိုမတှေ့ !! ဟားဟား
app ကိုတောင်းဆို google နှစ်လုံးကို သင်ခန်းစာ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု